काठमाडौंको यो रेस्टुराँ जहा पाइन्छ ६५ रुपैयाँमै खाना, पैसा नहुनेलाई नि:शुल्क ! « Bagmati Online
काठमाडौंको यो रेस्टुराँ जहा पाइन्छ ६५ रुपैयाँमै खाना, पैसा नहुनेलाई नि:शुल्क !
काठमाडौं । कहिलेकाहीं संकटहरूले पनि अवसर सिर्जना गर्ने रहेछन् । त्यसैले त भनिएको होला समस्यालाई अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ भनेर । कोरोना महामारीपछि यस्ता थुप्रै दृश्यहरू देखा परे । संकट र समस्याबीच मानिसहरूले थुप्रै नयाँ–नयाँ सोच जन्माए । कोरोनाकालपछि व्यापार र सेवा भावका थुपै्र कामहरू सुरुवात भए । ‘हाम्रो खाना घर’ले माघ १७ बाट सञ्चालन गर्न लागेको ६५ रुपैयाँमै खाना त्यसैको गतिलो उदाहरण हो । राजधानीमा यति सस्तो दरमा खाना खुवाउने सम्भबत: यो पहिलो रेस्टुराँ हुन सक्छ । व्यापारभन्दा सेवा भावले बढी प्रेरित देखिन्छ अनामनगरस्थित हाम्रो खाना घर । यो यस्तो रेस्टुराँ हो, जसले सबैलाई ६५ रुपैयाँमै भेज खाना खुवाउनेछ । कम आय भएका, विद्यार्थी, मजदुर, सर्वसाधारण, अस्पतालमा बिरामी कुरुवा, व्यस्त दिनचर्या भएर खाना पकाउन नभ्याउँनेलाई लक्षित गर्दै हाम्रो खाना घरले यस्तो सुविधा प्रदान गर्न लागेको हो ।
अनामनगरको बिगमार्ट नेरै छ, हाम्रो खाना घर । यो रेस्टुराँले भेज आइटम सर्भ गर्नेछ । जहाँ एकै पटक ८३ जना व्यक्ति बस्न सकिने क्षमता छ । रेस्टुराँका अनुसार अस्पतालमा रहेका बिरामी र कुरूवालाई भने डेलिभरी गरिने छ । पैसा नहुने, अभाव र समस्यामा परेका व्यक्तिहरुलाई नि:शुल्क खाना खुवाईनेछ । ६५ रुपैयाँमा खाना उपलब्ध गराउने सोच कसरी सुरु गर्‍यो ? त्यसको पृष्ठभुमि हाम्रो टिम नेपालसँग जोडिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि धेरैको बिचल्ली भयो । लकडाउनमा कैयौंले रोजगारी गुमाए । कतिलाई दैनिकी चलाउनै धौधौ भयो । कामको खोजीमा निस्किएकाहरू शहर छाडेर गाउ नै फर्किए । आम नागरिकलाई छाक टार्नै समस्या भयो ।
तिनै भोका पेटहरूलाई ‘हाम्रो टिम नेपाल’ले चैत १४ देखि सेवा दिन थाल्यो । ५ वर्षदेखि काम गरिरहे पनि गत असारदेखि संस्था दर्ता गरेरै काम अगाडी बढाइएको छ । मनकारी व्यक्तिहरु जोडिएको ‘हाम्रो टिम नेपाल’ सक्रिय त पहिल्यै थियो । लकडाउनपछि झन् सक्रिय बन्यो । राजधानीका खुलामञ्च, महालक्ष्मीथान, तिलगंगा लगायतका क्षेत्रमा स्वयंसेवकहरुले खाना बाँड्न थाले । पुलमुनी बस्नेदेखि, मठ मन्दिर र अस्पतालबाहिर रात कटाउनेहरुलाई पनि ‘हाम्रो टिम नेपाल’ ले सहयोग गर्‍यो ।
लकडाउनमा खाना, खाद्यान्न बाँडेको यो संस्थाले २५ जिल्लामा सिरक, डसना, लगायतका सामग्रीहरु वितरण गर्‍यो । लकडाउनकै बेला फरक क्षमता भएका, दृष्टिविहिनलाई घरमै रासन पुर्‍याउनेदेखि समस्यामा परेका व्यक्तिहरुको कोठा भाडा पनि तिरिदियो । राजधानीमा अलपत्र परेका कतिपय नागरिकलाई ‘हाम्रो टिम नेपाल’ले घर जाने टिकट काटेर उद्धार गरिदियो । त्यो बेला झण्डै एक सयलाई खाना खर्च दिएर टिकट काटिदिएको ‘हाम्रो टिम नेपाल’ का सदस्य उमेश बोहरा बताउँछन् ।
२०७६, चैत १४ देखि सुरु भएको खाना वितरण अभियान अहिले पनि जारी छ । सेवाको त्यही काम गर्दागर्दै हाम्रो टिम नेपालले नयाँ सोच जन्मायो, ६५ रुपैयाँमा खाना खुवाउने । महिनाभरीका लागि ३ हजार ९ सय रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्ने । बिभिन्न पेशा, व्यवसायमा सक्रिय व्यक्तिहरु मिलेर जन्मिएको हाम्रो टिम नेपाल सामाजिक सेवामा सक्रिय छ । यसमा ९ जनाको कार्य समिति छ भने ११ सय सदस्य आवद्ध छन् । सुदुरपश्चिमदेखि पूर्वसम्मका सबै व्यक्तिहरु यसमा जोडिएका छन् । राज्यको आँखा नपुगेका क्षेत्र, अभाब र समस्यामा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले धेरैलाई एकै ठाउा भेला गरायो ।
विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुको यसमा ठूलो समुह छ । आफ्नो व्यवसायबाट बचेको समय उनीहरु समाजसेवा लगाइरहेका छन् । संस्थाको नारा नै छ, भोकमुक्त, नांगोमुक्त, भेदभावमुक्त राष्ट निमार्ण, राज्यका हरेक सेवा, सुविधा हरेक नागरिकलाई समान अधिकार । सस्तोमा खाना खुवाउने अभियानको श्रेय खासगरी हाम्रो टिम नेपालका अध्यक्ष विमल पन्तलाई जान्छ । सहकर्मी साथीहरुसँग छलफल गरेपछि उनले यो कामलाई अगाडी बढाएका हुन् । लकडाउन नलम्बिएको भए अझै यो काम पहिले नै सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको पन्त बताउँछन् ।
काठमाडौंमा महंगा–महंगा होटेल छन् । सेवामुलक भन्दा नाफामुलकको बाढी नै छ । तल्लो वर्गलाई लक्षित गर्दै होटेल, रेस्टुराँ खुलेनन् । ‘हामीले कम पैसा हुने र समस्यामा परेकालाई लक्षित गर्दै यो सेवा सुरु गर्‍यौं, यहाँबाट उठेको पैसा पनि समाजसेवामै खर्चिने छौं,’ अध्यक्ष पन्तले भने । काठमाडौंका सडकमा हिंड्ने कोही पनि भोकै नपरुन् भन्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको उनले सुनाए । नाफा जति आपतकालिन समस्या बाढी पहिरो, आगलागी, बिपन्न र फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई सघाउने लक्ष्य राखेको उनी बताउँछन् ।
‘हाम्रो खाना घर’ मा बेलायत बस्ने समाजसेवी इशा गुरुङ र हाम्रो टिम नेपालको व्यापारिक साझेदारी छ । रेस्टुराँ कति लगानीमा खुल्यो ? यसको लागत खर्च कति हो ? यसबारे हाम्रो टिम नेपालका अध्यक्षले बताउन चाहेनन् । आर्थिक कारोबारका सवालमा सोधिएका प्रश्नमा उनी पन्छिए । अनामनगरस्थित ‘हाम्रो खाना घर’ मा जोसुकैले दैनिक १ सय ३० रुपैयाँमै बिहान बेलुका भोक मेटाउन सक्नेछन् । हाल ९ जना स्टाफ कार्यरत छन् । ३ जनाले तलबमा र बाँकीले स्वंयसेवा गर्ने छन् । दैनिक रुपमा भीढ बढेमा काठमाडौंका नाकाहरुमा शाखा खोल्ने तयारी पनि भइरहेको छ । त्यस्तै मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा शाखा विस्तार गर्ने तयारी थालेको अध्यक्ष पन्तले बताए । कम्तिमा १० वटा शाखा पहिलो चरणमा खोल्ने तयारी भईरहेको हाम्रो टिम नेपालका विश्वबन्धु भण्डारी बताउँछन् ।
‘हाम्रो खाना घर’ मेनुमा अहिले भेज आइटम मात्र उलब्ध छ । बिस्तारै खाजा, नास्ताको आइटम थपिनेछ । बजार मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा उपलब्ध गराउने हाम्रो टिम नेपालका सदस्य उमेश बोहरा बताउँछन् । यसअघि यही समुहले कपडा बैंक पनि सुरु गरेको थियो । राजधानी र उपत्यका बाहिरका शहरमा कपडा बैंकले छोटो समयमै मन जितेको थियो । आफूसँग लुगा हुनेले दिने र नहुनेले लिने कपडा बैंक आम मानिसहरूले रुचाएका थिए ।
हाम्रो टिम नेपालको लिस्टमा स्वरोजगारका अरु पनि योजनाहरु छन् । विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको ठूलो जमात छ यसमा । आफूले सिकेको सीप, अनुभव स्वदेशमै लगानी गर्ने उनीहरुको योजना छ । उनीहरू सकेसम्म स्वदेशी उत्पादन र यसको प्रयोगमा जोड दिन चाहन्छन् । संस्थाका अध्यक्ष पन्तका अनुसार उत्पादनमुलक उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।‘आ–आफ्ना ठाउबाट सकेको योगदान दिने हो भने समाजमा पक्कै परिवर्तन आउछ,’ पन्तले सुनाए । विकास न्युजबाट